Mihatra ny loza | NewsMada
Loza iray, loza roa, loza tsy mety voafehy fa mamely isan-taona. « Tora-bato avy any an-danitra io », hoy ireo tsy te hisaina lavitra. Ekena fa loza voajanahary tokoa ity mamely mafy ny mponina any avaratry ny Nosy ity. Tsy ny any avaratra ihany fa hatrany atsimo koa, saingy ny fisehony no tsy mitovy. Ny voalohany tondradrano, ny faharoa haintany. Mihalalina hatrany ny fahoriana efa iainana isan’andro noho ny fahantrana noho izao loza mihatra izao.
Fa aleo tsy hionona amin’ny tranga efa miseho fa halefa lavidavitra araka izay tratra ny fisainana. Noho ny inona moa ny nahatonga ny loza voajanahary ho mamely mafy toy izao ? Noho ny fiovaovan’ny toetr’andro ny valiny. Ny fanimbana ny tontolo iainana ataon’ny olombelona ihany anefa no fositra nahatonga izany : doro tanety, fandripahana ala tsy am-piheverana, fihazana ireo biby isan-karazany… Maro tsy voatanisa eto izany. Toa mandrora mitsilany ihany, raha dinihina, ny olona. Tsy hoe handatsa ireo voa akory fa fampahatsiahivana ny antony nahavoa.
« Rano raraka tsy azo raofina io. » Efa fefiky ny rano ny faritra avaratry ny Nosy noho ny orambe tsy an-kiato any an-toerana. Mbola hitohy izany, araka ny fanambaran’ny mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrianomby. Tsy hay tohaina intsony fa efa mby an-koditra. Efa nahazo filazana loza mihatra ireo distrika maromaro ao amin’ny faritra Boeny. Fitanisana ny zavatra simba sisa azo atao; ny fisorohana izany, efa tara loatra.
Mihatra ny loza vao mikoropaka ny fitondram-panjakana. Fanampiana vonjy ranovaky no azo atao, ankehitriny. Hararaotin’ny sasany indray aza izany mba hisehosehoana amin’ny maha mpanao politika azy. Dia ho toy izany hatrany izany ny hiainan’ny vahoaka isan-taona ? Hiaina amin’ny ody varatr’i Mompera « ny aza voany » foana sy « soro-baton’ilay jamba, voa vao mihilana ». Aiza ny fandraisana fepetra sy ny fitsinjovana avy amin’ny mpitondra ?